Izinto Okufanele Uzikhumbule Ngenkathi Idlala Ama-Slot Machines Online- Umhlahlandlela Wokuya - Amakhodi Amabhonasi E-Casino Ase-inthanethi
Akulona iqiniso elingaziwa ukuthi abantu abagijima futhi badlale bobabili spilleautomater inthanethi, bathanda ukudlala imishini yokugembula. Amazwe afana ne-United States, imishini yokugembula iyimidlalo yekhasino ekhethwa kakhulu futhi edlalwayo. Ngenkathi kwezinye izifunda, ukuthandwa kukhuphukela ezingeni lapho umdlalo we-slot uphikisana nomdlalo wetafula. Ngalokhu, yonke into iholela embuzweni obalulekile wokuthi, 'umuntu uphumelela kanjani emishinini yokugembula?', 'Ingabe kukhona amaqhinga namathiphu okushaya imishini yama-slot?' nokuthi 'Abantu bawushaye kanjani ngempela umshini?'.
Uma kubhekwa, konke kuyindaba yamathuba, ayikho imishini ye-blackjack noma ye-video poker futhi amasu ayo asikwa emaphethelweni ayo wezibalo. Izimo emishinini yama-slot zimile, akukho lutho umuntu angalwenza ngokuzibophezela ngokomthetho okuguqula yonke imiphumela yomphumela, yize abaculi be-scam kungenzeka ukuthi bathola impumelelo embalwa, kuze kube yilapho bebanjwa futhi beboshwa. Kepha kunezindlela nezindlela ezingakusiza ekukusizeni kakhulu emdlalweni.
Ngenkathi idlala imishini ye-slot, inezindlela ezimbili ezinemibuzo kule mibuzo ephakanyisiwe, njengezeluleko zokudlala uhlelo lwemishini yokugembula lokudlala ngamandla abo namaphutha abo, maqondana nokukhohlisa kwemishini yokugembula nezinye izinhlobo zemikhonyovu.
Okwenziwe ngemishini yokubeka
Ithiphu 1- Izikhala zehlelo eziphakanyisiwe zinamathuba aphezulu wokukhokha kanye namaphesenti
Kucatshangelwa kwisici esibi lapho imidlalo yama-reel amathathu ilawulwa kuma-slot floor nalapho iningi lemidlalo kuyizikhala zamavidiyo. Izikhala zamaDola zikhiqiza amaphesenti amakhulu kakhulu wokukhokha kunama-quarter slots, kungcono kakhulu kunama-nickel slots nemidlalo yepenny. Umuntu akufanele asheshe aphume ayodlala ama-dollar slots. Kunezindawo eziningi zokungena nezamaphesenti wokukhokha, kusukela kunani lokuzijabulisa nokuthi yini umuntu ayidingayo kusuka kumdlalo.
Ithiphu 2- Uma umuntu edlala i-slot eqhubekayo, qiniseka ukuthi ukubheja okukodwa kufanelekile ukuthola ama-jackpots
Kumashini we-slot oqhubekayo, iphesenti lokubheja okuphakeme kakhulu lengezwa kuma-jackpots, imishini yama-slot enamasondo amathathu inokuqhubekela phambili okukodwa ekuzuzeni okuphezulu nokubheja izinhlamvu zemali eziphezulu ukuze ufaneleke. Kumishini yokubeka izinhlamvu zemali ezintathu, umuntu akakwazi ukuwina okuqhubekayo uma kubhejwa, yizinhlamvu zemali eyodwa kuphela noma ezimbili. Lapho ifika enhlanganisweni ephezulu ye-jackpot kulayini wokukhokha evumela ukukhokha okuncishisiwe ngenani elinqunyiwe. Imvamisa, ukuqhubekela phambili kwamazinga amane kubekwa kumalebula omncane, omkhulu, omkhulu, nakwisiliva, igolide, iplatinamu, noma okunye okufana nawo.
Ithiphu 3: Khetha uhlobo lwemidlalo elingana nezinhloso zakho nobuntu obudlalayo
Ufuna uhlobo lwemidlalo ekunikeza amathuba aphezulu we-jackpots, lapho umdlalo unwetshwa ngokuwina okuncane noma phakathi naphakathi? Imidlalo enamasondo amathathu igcizelela kakhulu ama-jackpots abo aphezulu kepha futhi iba nemvamisa ephansi lapho kukhulunywa ngokulahlekelwa ama-spins amaningi. Lokhu kukunika ithuba elihle lokuwina okukhulu kepha futhi ulahlekelwe ngokushesha.
Ithiphu 4: Yazi isabelomali sakho, vumelana naso, futhi wazi nokuthi kufanele ume nini
Kunezikhathi eziningi emishinini ye-slot engagcina ilahlekelwe yimali futhi lapho uma ingasebenzi ngokuhlakanipha, ingaholela ekuhlulekeni okuningi. Kunamathuba okuthi umuntu anqobe kuma-slots, futhi makhulu. Kuyisinqumo esihlakaniphile ukungabhejeli okuthile umuntu ongeke akwazi ukulahlekelwa yikho, futhi uqinisekise ukuthi imidlalo yokudlala izolingana nebhange lakho.
Uma uthanda ukudlala izikhala eziku-inthanethi futhi ufuna umhlahlandlela, iNorsk Casino yindawo enhle yokuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho uma kukhulunywa ngezikhala eziku-inthanethi.
Ama-bonus amasha we-casino yakamuva:
I-35 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-Betrally Casino
I-80 yamahhala igodla ibhonasi yekhasino ku-Casino yekhasi lephromoshini
I-150 yamahhala i-spin bonus ku-Karl Casino
I-165 mahhala ayikho ibhonasi ye-deposit ku-PrimeScratchCards Casino
I-75 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Casino elandelayo
I-95 mahhala akukho ibhonasi yephophozi lapha LAPHA Casino
I-160 yamahhala i-spin bonus ku-Playamo Casino
I-50 ayikho ibhonasi ye-deposit eBetChan Casino
I-140 mahhala i-spins ibhonasi ku-BlingCity Casino
I-175 mahhala ayikho ibhonasi yediphozi enhlanhla Casino
I-145 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit ku-SpilleAutomater Casino
I-165 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-MainStage Casino
I-50 yamahhala e-MagicalVegas Casino
I-170 yamahhala e-24hBet Casino
I-125 yamahhala e-Silk Casino
I-15 yamahhala i-spin bonus e-EuroLotto Casino
I-160 ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-SlotsandGames Casino
I-135 ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-Paris Casino
I-65 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Buzz Casino
I-155 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino e-Mega Casino
I-130 yamahhala e-spin bonus e-Paf Casino
I-150 ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi eReelIssland Casino
I-45 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-Leovegas Casino
I-50 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-Star Casino
I-40 yamahhala igodla ibhonasi yekhasino ku-DiamondWorld Casino